ပင်မစာမျက်နှာ ပထမ ဦး ဆုံးသတင်း Psyche & seduction သင် (ဖြစ်နိုင်သည်) မသိသောသုက်ပိုးနှင့်ပတ်သက်သည့်သိချင်စိတ် ၁၁ ခု
လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်အကြောင်းအရင်းများစွာရှိသည် စိတ်ခံစားမှု ထို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ။ ထို့ကြောင့်အကြောင်းအရာ၏ကျယ်ပြန့်မှုကိုအများအားဖြင့်လိင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအရလူသိများသည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းများရှိကြောင်းလူတိုင်းသိသည်မဟုတ် သင်၏လိင်စိတ်ကိုတိုးပွားစေခြင်း,5အာရုံနှင့်အတူကစားခြင်းနှင့်သူတို့ကိုအလေးပေး, ဒါမှမဟုတ်အမြဲတမ်းဖြစ်ရပြီအချို့သောရာထူးရှိပါတယ် လူအပေါင်းတို့၏အကြိုက်ဆုံးဘယ်သူမှမဖယ်ထုတ်ကြပါ
နောက်ထပ်မကြာခဏလူသိများဆောင်ပုဒ်၏သောကွောငျ့ဖွစျသညျ သုက်ပိုး။ အထီး seminal အရည်နှင့်ပတ်သက်။ အများအပြားသိချင်စိတ်များနှင့်ဤဖြစ်ကြ၏ 11 မိန်းမတိုင်းနီးပါးမသိ!
၁။ သုက်ပိုးကိုမည်သည့်နေရာမှပြုလုပ်သနည်း၊ ၎င်းသည်မည်သည့်နေရာမှလာသနည်း။
သုက်ပိုးသည်ဖွဲ့စည်းမှုမှလာသည် အရည်သုံးခု: မှလာမယ့်အရည် ဝှေးစေ့ နှင့်ပါဝင်သည် spermatozoa၏အရည် seminal တွေ့နေကျမဟုတ်သော နှင့်အရည် အကြိုဟောပြောမှု.
Seminal အရည်သည်ထုတ်လွှတ်မှု၏ထုတ်လွှတ်မှုမှ ပို၍ တိကျစွာလာသည် ဆီးကြိတ် နှင့် seminal တွေ့နေကျမဟုတ်သောမှ။ အတွက်အာဟာရများပါဝင်သည် အဆိုပါ spermatozoa အစာကျွေး နှင့်လည်းဖန်တီးရန်ဆောင်ရွက်ပါသည် တစ် ဦး အဆင်သင့်ပတ်ဝန်းကျင် ပုံမှန်အားဖြင့်အက်ဆစ်ဖြစ်သောအင်္ဂါဇာတ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ spermatozoa များအတွက်။
ဝှေးစေ့များကထုတ်လုပ်သောဤအထီးမျိုးပွားခြင်းဆဲလ်များသည်ဥများကိုဥအတွင်းသန္ဓေတည်စေရမည် ထိုးဖောက် သန္ဓေသားကိုဖန်တီးရန်။ သူတို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုအကြောင်းကိုပါ သုတ်ရည်လွှတ်ဘို့ 200 သန်း, ဒါပေမယ့်ရာဂဏန်းအနည်းငယ်သာသားအိမ်ခေါင်းကနေသားအိမ်မှတဆင့်ကြက်ဥတည်ရှိရာ fallopian ပြွန်သို့သွား။
သုက်လွှတ်မှုမတိုင်မီအနည်းဆုံးသောလျှို့ဝှက်ချက်ကိုကြိုတင်ဟောပြောမှုအရည်ကိုလိင်အလိုဆန္ဒ၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်ရှိယူထရွန်တူးမြောင်းအတွင်းသို့ထုတ်လွှတ်သောဂလင်း (Goper) ဂလင်းများမှထုတ်လွှတ်သည်။ ၎င်း၏အခန်းကဏ္။ သည်ဆီးလမ်းကြောင်းနှင့်ဆီးလမ်းကြောင်းတို့တွင်ရှင်းလင်းသွားရန်ဖြစ်သည် အဆိုပါ glans ချောဆီ။ ၎င်းတွင်သုက်ပိုးအချို့ပါ ၀ င်ကောင်းလိုအပ်လိမ့်မည် ကွန်ဒုံးတင်ထား ပေါ်လာမီ။
သုတ်ရည်လွှတ်မှုနှုန်းတွင်ထုတ်လွှတ်သောသုတ်ရည်ပမာဏသည်ကွဲပြားခြားနားသည်2မှ6ml ကို။ အနီးကပ်သုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်း၏အမှု၌လျော့နည်းစေသည်။ တကယ်တော့, သုက်ပိုးအနည်းငယ်ဖြစ်ပါတယ် လျော့နည်းအာရုံစူးစိုက် သငျသညျမကြာခဏ ejaculate အခါ။ သို့သော်အထူးကိစ္စများတွင်မှလွဲ။ ထိရောက်မှုအတွက်ကွာခြားချက်များသောအားဖြင့်အရေးမပါ။
ဒါကမကြာခဏလိင်ဆက်ဆံ fertilization တိုး၏အခွင့်အလမ်းတွေကို မြေသြဇာကောင်းသောကာလအတွင်း။
၃။ သုက်ပိုး၏အရည်အသွေးကိုမည်သို့စစ်ဆေးနိုင်မည်၊ မည်သည့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖြစ်သနည်း။ ဒါ့အပြင်အခမဲ့လား။
သုက်ပိုးများ၏အရည်အသွေးကိုတစ်ခုအားဖြင့်စစ်ဆေးသည် spermogram။ သုက်ပိုးပုံသေကိုအတည်ပြုပြီးသောဆေးစစ်ဆေးသည့်ဓာတ်ခွဲခန်းအားလုံးတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဒီစာမေးပွဲကိုလိုအပ်သည် တိကျသောပစ္စည်းကိရိယာများ နှင့်အရည်အချင်းနှင့်အရည်အချင်းပြည့်မီသောပုဂ္ဂိုလ်များကဖျော်ဖြေရမည်ဖြစ်သည်နှင့်တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ငွေပေးချေမှု (သို့သော်သင်ဆေးကုသမှုခံယူပါကပြန်လည်ထုတ်ပေးနိုင်သည်) ။
- က spermogram spermatozoa ၏အသွင်အပြင်, အရေအတွက်နှင့်တက်ကြွလေ့လာ;
- က spermocytoma သူတို့ရဲ့ပုံသဏ္atာန်ကိုကြည့်ပါ။
သုက်ပိုးတစ်ခု ခန္ဓာကိုယ်လျှို့ဝှက်ချက် ထိုကဲ့သို့သောတံတွေး, အင်္ဂါဇာတ်လျှို့ဝှက်ချက်များသို့မဟုတ်အခြားအဖြစ်။
လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထုတ်လွှင့်နိုင်သည် နာမကျန်းဖြစ်, ဒါပေမယ့်ဆောင်လုလင်ထိခိုက်လျှင်သာ။ ကူးစက်တတ်သောရောဂါအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ အန္တရာယ်နည်းပါးသည်။ ဥပမာ၊ HIV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး (AIDS) နှင့်အသည်းရောင်အသားဝါဘီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံထားရသူတစ် ဦး သည်သုက်ပိုးအန္တရာယ်မြင့်မားသည့်သုက်ပိုးကိုထုတ်ပေးသော်လည်းအခြားကူးစက်မှုများသည်မနည်းနိုင်ပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဤရောဂါများစွာသည်တစ် ဦး တည်းကူးစက်သည် အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံမှုမှတဆင့် နှင့်မဟုတ် fellatio မှတဆင့်။
၅။ သုက်ပိုးမနေလျှင်သုက်ပိုးသည်မည်သည့်ကုထုံးများနည်း။ သူတို့ဥများကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက်လှုံ့ဆော်နိုင်ပါသလား
Spermatozoa အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်ထိရောက်သော spermatozoa အနည်းငယ်သာပါဝင်သည့်သုက်ပိုးတွင်သုက်ပိုးအာရုံစူးစိုက်မှုနည်းစနစ်များရှိသည်။ ထိရောက်သောသူမြား၏နံပါတ်တိုးမြှင့် နှင့်မျိုးပွားစဉ်အတွင်း fertilization ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်ဖို့။
ဟုတ်တယ်၊ သုက်ပိုးကမင်းကိုအဆီကျစေတယ် fertilization!
အမှန်မှာ၊ ၎င်းသည်ကိုယ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုရရှိစေပြီးကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာစေသည် ၁၀ ကီလိုဂရမ်,9လအတွင်း, တခါတရံပိုမို ကလေးမွေးဖွားစဉ်နှင့်ပြီးနောက်ပျောက်ဆုံးသည် အလျင်အမြန်
ဤအခြေအနေ မှလွဲ၍ သုက်ပိုးကိုမျိုချပါ ဒါကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြမထားဘူးမည်သို့ပင်စားသုံးမှုလမ်းကြောင်း။
အဘယ်အရာကိုအစေ့အဖိုးတန်စေသည် ၎င်းသည်၎င်း၏အရောင် (သို့) အရောင်မဟုတ်ပါသို့သော်၎င်းတွင်ပါဝင်သောသာမန်သုက်ပိုးအရေအတွက်နှင့်၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားနိုင်မှု (သို့မဟုတ်သက်ရှိရှင်သန်မှု) ။ အကယ်၍ သံသယဖြစ်ပါကအခြေအနေတစ်ခုကိုပိုကောင်းအောင်စစ်ဆေးပါ spermogramငါတို့အစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့စမ်းသပ်မှု။
၈။ လိင်ဆက်ဆံမှုတစ်ခုပြီးတိုင်းဘာကြောင့်သန္ဓေသားသည်ယောနိထဲ၌မနေဘဲအလိုအလျှောက်ထွက်မလာသနည်း။ သန္ဓေသားပမာဏသန္ဓေတည်ကာလအတွင်းအဆုံးအဖြတ်အဆုံးအဖြတ်လား?
သုက်ပိုးတန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်သည့်အချက်များဖြစ်သည် spermatozoa ၏အာရုံစူးစိုက်မှုသူတို့ရဲ့တက်ကြွ, motility နှင့် shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်။ သုက်ပိုးပမာဏသည်အရေးမပါလှပါ။
ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့ မြေသြဇာကောင်းသောကာလသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာသည်သုက်ပိုးနှင့်အလွန်ထိတွေ့နိုင်သည် fallopian ပြွန်။ မျိုးဥထွက်ချိန်တွင်ဓာတ်မြေသြဇာပြုလုပ်ရန်ပစ္စည်းအလုံအလောက်ရှိသည်။
ဒါကြောင့်ဓာတ်မတည်မှကြွလာသောအခါ, ဘာမှဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဓါတ်မတည့်ခြင်းကိုကြေငြာခြင်းမပြုမီ၎င်းကိုသက်သေပြရမည် ဇီဝအချက်ပြမှုများနှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု။ ဥပမာအားဖြင့်, ၏အသွင်အပြင် လည်ချောင်းအတွင်းသေးငယ်တဲ့လက်နက်သို့မဟုတ်ရောင်ရမ်းဝက်ခြံ။
၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သော်လည်းသင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်လိုပါကကိုယ်ဝန်ဆောင်လျှင်အရေးယူခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ၆ လပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်မှမဖြစ်ပွားပါ။
သုက်ပိုးများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ်မူတည်။ ကြောင့်လုပ်ဆောင်ရန်ထိရောက်သောနိုင်ပါတယ် ကြွယ်ဝသောသုက်ပိုးနှင့်အတူအတုသုက်။
သုတ်ရည်တွင်သွေးရှိနေခြင်းသည်လေးနက်သောလက္ခဏာဖြစ်သည် အထီးလိင်အင်္ဂါလမ်းကြောင်းနှင့်အတူပြaနာတစ်ခု။ ဝှေးစေ့များ, seminal တွေ့နေကျမဟုတ်သော, ဆီးကျိတ်၏ရောဂါကူးစက်သို့မဟုတ်ရောင်ခြင်း။ စမ်းသပ်မှုဖျော်ဖြေရမည်ဖြစ်သည် လျင်မြန်စွာ.
ယခင်ဆောင်းပါးCristiana dell'Anna နှင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်တောင်ပိုင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်
နောက်ဆောင်းပါးခရီးသွားနေစဉ်လှပဖို့ဘယ်လို: မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအကြံပြုချက်များ 8
ငါတို့ဘာကြောင့် - အခြားသူတွေရဲ့သဘောထားကိုမပြောင်းလဲနိုင်တာလဲ။
အခြားသူများကိုပြောင်းလဲရန်မည်သို့လှုံ့ဆော်ပေးသနည်း - ခေါင်းဆောင်မှု (သို့) ဆက်စပ်ခေါင်းဆောင်မှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်း။
လူတစ် ဦး အဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ဤသဘောထားသည်အဘယ်က လာ၍ ၎င်းအားမည်သို့ဖျောက်ဖျက်သနည်း။
"စကြာ ၀ Inာ၌"
LIPSTICKS: FALL-WINTER 2019 အတွက်ထူးခြားသည့်အရောင်များ
မအောင်မြင်သေးသော ၀ မ်းနည်းပူဆွေးခြင်း - ကျွန်ုပ်တို့မလွန်သေးသောလက္ခဏာ ၅ ခု
ဇွန်လ 3, 2021
ကလေးများနှင့်သက်ဆိုင်သောသီချင်းများ - အီတလီနှင့်နိုင်ငံခြားအနုပညာရှင်များ၏ထိပ်ဆုံး ၇